संसद् अब कसरी अघि बढ्ला ? - Karobar National Economic Daily
संसद् अब कसरी अघि बढ्ला ?
query_builderJanuary 2, 2017 7:08 AM supervisor_accountतीर्थराज बस्नेत visibility421
सत्तापक्षः विधेयक पेस गर्ने, प्रतिपक्षः कुनै हालतमा नदिने
काठमाडौंः एक महिनायता लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको व्यवस्थापिका–संसद् बैठक आज (सोमबार) पनि बोलाइएको छ । तर, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल आआफ्नै अडानमा रहेका कारण संसद् बैठक सञ्चालन हुनेमा अन्योल नै देखिएको छ ।
सरकारले मंसिर १४ गते व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लगायत दलले संसद् बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका छन् । सत्तारुढ दलहरू भने संशोधन विधेयकलाई लिएर संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
आजका लाग आह्वान गरिएको बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरूले संशोधन विधेयक पेस गरी त्यसमाथि छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । तर, प्रतिपक्षी दल संशोधन विधेयकमाथि कुनै पनि हालतमा छलफल हुन नदिने पक्षमा छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संसद् सञ्चालनका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा अडान राख्ने जानकारी दिए ।
“सरकारले संशोधन ल्याइसकेपछि छलफल हुन्छ र फिर्ता लिने कुरै हुँदैन”, प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले भने, “कुनै विषयमा असहमति भए त्यो संसद्भित्रै राख्ने हो । लोकतन्त्रमा कुनै दलको अडानका कारण संसदीय प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु अलोकतान्त्रिक कार्य हो ।”
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताका अनुसार आजको बैठकमा संशोधन विधेयक पेस गर्ने तयारी छ । माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले संसद्मा संशोधन विधेयक पेस गर्ने जानकारी दिँदै सकेसम्म सहमति गरेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।
“प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले पनि मिलेर अगाडि बढ्ने तयारीस्वरूप छलफलमा हुनुहुन्छ”, प्रवक्ता भुसालले भनिन्, “मिलेर जारी गरिएको संविधान मिलेरै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो ।” उनले संशोधन विधेयक कुनै पनि हालतमा फिर्ता मात्र होइन परिमार्जनसमेत नहुने दाबी गरिन् ।
एमालेले भने कुनै पनि हालतमा संशोधन विधेयक संसद्मा अगाडि बढाउन नदिने जनाएको छ । संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहितविपरीत भएको भन्दै एमालेलगायत नौ दल विधेयक पेस गर्न नदिने अडानमै छन् । “राष्ट्रहितविपरीत ल्याइएको संशोधन विधेयकमाथि कुनै पनि हालतमा संसद्मा छलफल हुँदैन”, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले भने, “हामी कुनै पनि हालतमा विधेयक पेस गर्न दिँदैनौं ।”
महासचिव पोखरेलले अहिले संविधान संशोधन गर्न नहुने जिकिर गर्दै नौ दलले विरोध जनाइसकेको अवस्थामा विधेयक संसद्मा पेस नहुने दाबी गरे । “सरकारले संशोधन विधेयक फिर्ता लिई निर्वाचनमा लागे एमालेले सहयोग गर्छ”, उनले भने, “सभामुखज्यूले सहमति खोज्न र प्रक्रियामा छलफल गर्न भन्नुभएको छ, यो प्रयास सकारात्मक छ ।”
उनले संशोधन विधेयकविरुद्ध एमालेसहितका नौ दलले यही पुस २२ गते गर्ने भनेको जनप्रदर्शन राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको दाबी गरे । राजधानीमा हुने जनप्रदर्शनमा ३३ ठाउँबाट जुलुस निकालिने र ५ सय स्वयंसेवक परिचालन गरिने उनको भनाइ छ ।
संविधान संशोधन व्यवस्थापिका–संसद् सत्तारुढ प्रतिपक्षी दल